‘भारतको खाल्डो’ र नेपाल | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो ‘भारतको खाल्डो’ र नेपाल
on: २२ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०८:११ तीतो मीठो
‘भारतको खाल्डो’ र नेपाल
गरीबमाथि गम्भीर चिन्तन -
सामाजिक सञ्जालमा अहिले भारतको नक्साजस्तै देखिने ललितपुरतिरको एक सडकमा परेको खाल्डोको तस्वीर निकै भाइरल बनेको छ । पछि कसले हो त्यसमा श्रीलङ्कासमेत जोडेको देखिन्छ । यसरी नक्साजस्तै फोटोमै सही भारत पानीमा डुबेकोमा धेरै नेपालीले निकै खुशी व्यक्त गरेका छन् । यसबाट नेपालीहरू भारतप्रति कति असन्तुष्ट छन् भन्ने पनि देखाउँछ । यो नेपालीहरूमा रहेको भारतविरोधी ग्रन्थी मात्र हो या सरकारी निकम्मापनप्रतिको आक्रोश पनि ? जे होस्, एकछिनलाई मानौं भारत साँच्चै नै पानीमा डुबेछ । त्यसो भएमा के होला त ?
पहिलो कुरा त नेपाललाई स्वीट्रजल्याण्ड बनाउने नेपाली नेताहरूको सपना कहिल्यै पूरा हुँदैन । अथवा नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउँछु भन्दै नेपाली जनतालाई सधैं मूर्ख बनाइरहने बहाना बाँकी रहँदैन । किनकि, भारत डुब्ने भनेको नेपालको मुखमा समुद्र आउने भनेको पनि हो । स्वीट्जरल्याण्ड हुन त नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित नै रहिरहनु पर्‍यो नि त !
नेपाल स्वीट्जरल्याण्ड नभए सेसेल्स, मरिसस वा माल्दिभ्स बन्न सक्ला नि त भन्नुहोला । हो, ती पनि आफ्नै हिसाबले सुन्दर ठाउँ हुन् र स्वीट्जरल्याण्डजस्तै पर्यटनका केन्द्र पनि हुन् । तर, भारत डुबेर समुद्र नेपालको सँघारमै आए पनि नेपाल सेसेल्स, मरिशस वा माल्दिभ्स बन्न सक्तैन । किनकि, ती देशहरूजस्तै बन्न चारैतिर समुद्र चाहिन्छ । नेपालको उत्तरमा त चीन छ । चीन पनि डुब्यो भने मात्र नेपाल ती देशहरूजस्तै बन्न सक्ला । तर, चीन पनि डुब्यो भने नेपालको चैं हविगत के होला त ? चीन अलिअलि डुबेछ भने पनि नेपाललाई नै नबगाउला र ? ल चीन डुबे पनि नेपाल पूरै डुबेनछ भने फेरि नेपालले खेल्ने गरेको भारत–चीन खेल त समाप्त हुन्छ । चीन–चीन मात्र खेल खेल्न सक्ला र नेपालले ?
अर्काे सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने भारत पानीमा डुब्यो भने नेपाल बोर्डरसँगै जोडिएका भारतका जोगबनी, रक्सौल, रूपैडिया, गौरीफण्टा आदि भारतीय बजारमा सस्तोमा सामान किनमेल गर्न जानै पाइँदैन । उपचार गर्न दिल्ली वा पुना जान पाइँदैन । हाम्रा नेताहरूको राजनीतिक तीर्थाटन पनि रोकिन्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा त ठूल्दाइ कसलाई मान्ने ? राजकाज गर्न सल्लाह कोसँग लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ । अझ नेपाली बोर्डर क्षेत्रका खासगरी क्यासिनो र होटलहरू सुक्नेछन् । लाखौं नेपाली युवाहरूको एक प्रमुख रोजगारी गन्तव्य सुक्छ । मुम्बईमा पुगेर उदित नारायण र मनीषा कोइराला बन्न चाहनेहरूको सपना तुहिन्छ । भारतीय सेनामा भर्ती पाउन रोकिन्छ । नेपालीहरूका लागि कपाल काटिदिने, घरघरमा तरकारी फलफूल पुर्‍याउनेहरू वा प्लम्बिङ गर्न आउनेहरू बाटो बन्द हुन्छ । त्यसबेला नेपालीहरूको हालत के हुन्छ होला ?
भारत मात्रै डुब्यो भने पनि सार्क, बिमष्टेक आदि क्यै नि हुँदैन । ती कार्यक्रमले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवि कति धेरै बढेको छ, त्यो सबै रोकिन्छ । सडक, शहर सुन्दर बनाउने अवसर पनि रोकिन्छ ।
अझ चीन र भारत दुवै देशबाट रेल ल्याएर उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रधानमन्त्रीको सबै योजना तुहिन्छ । भारत डुब्यो भने नेपालको बजार र विकास पनि दुवै सुक्छ । किनकि, नेपाली सडकमा भारतीय गाडीजति सस्तो, सजिलो अन्यत्र कहाँबाट ल्याउने ? त्योभन्दा पनि नेपाली फिल्महलहरू के देखाएर चलाउने ? किनकि, नेपाली फिल्मले मात्र हलमा वर्षैभरि दर्शक तान्न सक्लान र ? अनि भारूसँगको नेपाली नोटको नाता अर्थात् ‘पेग’ टुटेपछि नेपाली रुपैयाँ डलरसँग अझ कति अवमूल्यन होला ?
सबैभन्दा प्रमुख कुरा त भारत डुब्यो भने दिनरात हामीले कसलाई गाली गर्ने ? बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भनेर बारम्बार कोसँग लडिरहने ? भारतले गर्दा नै नेपालको विकास हुन सकेन भनेर अहिलेजस्तो अर्काे कुन बहाना बनाएर उम्किने ?
हो, त्यही भएर होला भारतले के के गरेर नेपाली भूभाग डुबानमा पार्‍यो भन्दै जति कराए पनि नेपालका सम्बन्धित निकायहरू भारतसँग यसबारे कुरै उठाउन चाहँदैनन् । नेपालका केही भूभाग डुबेर के भो र ? भारतचाहिँ किमार्थ डुब्नु हुन्न ।
manko liddu gheu sanga khaye jasto.thikaixa yo pani yek bichar bimasra ho aakash tira forkera thukni aatmaglani.
Ani mahasayako Name chahi kina gopya?varatley thaha pauxa vanera?